Sata Hard Drive Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Sata HDD
Waa maxay Sata Hard Drive
Ma suurogalbaa in kabsado xogta ka Sata cajaladaha adag?
Sidee inuu ka soo kabsado files ka Sata Hard Drive?
Sata (ama ATA Serial) drive adag, sidoo kale loo yaqaan dekedda taxan disk adag, ayaa hadda bedelay PATA dhaqanka (ATA is barbar socda) drives adag oo noqday aalad lagu kaydiyo caadiga ah tiro on PC. The Serial ATA 1.0 faahfaahinta la aasaasay by Serial ATA Guddiga oo ay qabanqaabiyeen dhowr saarayaasha drive adag ee waawayn (oo ay ku jiraan Intel, APT, Dell, IBM, Seagate iyo Maxtor), iyo 2002, Guddiga ATA Serial qoreen Serial ATA 2.0 cayimidda, inkasta oo aanay qalabka Sata weli la sii daayay markii.
Serial ATA isticmaalaa xiriir caadaystay - ALMAATA bas Serial la signal saacad gundhig, qaladka awood ka xoog badan in la saxo on PATA wayn ama Eide drive adag. Farqiga ugu weyn waa in ay ka hubin kartaa si toos ah iyo khaladaad sax ma ahan oo keliya ee xogta, laakiin sidoo kale amarka waa ku wareejinaya, fiicnaado kalsoonida la isugu gudbiyo xogta si weyn. Interface ayaa taxan ee Sata ayaa qaab fudud (7 biinanka) iyo sidoo kale waa kulul-swappable, waxay keentaa faa'iidooyinka ka dhaqso iyo wareejinta xogta ku ool ah u dhexeeya qalabka.
Ka sokow, a "kala Signal maqalka System" waxaa loo isticmaalaa on Sata, taas oo si wax ku ool shaandhayso kari ka calaamadaha caadiga ah. Waxaana jirta in maaddaama awoodda ay shaandhaynta buuq aad u fiican, nidaamka Sata waa ay awoodaan in ay u ordaan hoos danab hoose (0.5V) ka badan is barbar socda ATA, taas oo macnaheedu yahay badbaadin karo awood badan.
Oo dhererkeeda cable ugu badnaan
Si kastaba, iyadoo aan loo eegayn sida weyn aad drive Sata adag yahay, dhacdooyinka khasaaro xogta dhici kartaa sababo kala duwan sida tirtirka shil xogta, qaab, dhaawac ama khasaaro xijaab, weerar virus, iyo in ka badan. Marka ay sidaasi kugu dhacdo, waxaa suurto gal ah inuu ka soo kabsado files lumay ka Sata drives adag? Dhab ahaantii. Marka la tirtiro / files formatting on Sata drives adag, aad si dhab ah uma tirtiro ka kooban, laakiin kaliya sixitaanka qayb ka mid ah drive adag Sata meesha files badiyay hore u bannaan u muqato. Sidaa darteed, waxaa jira fursad wanaagsan in aad dib u soo ceshano xogta lumay ka Sata drives adag la software kabashada hor rewritting bilaabmin. Rewritting dhigi doonaa files lumay unrecoverable.
Sidee inuu ka soo kabsado files ka Sata HDD
First of dhan, heli Sata kabashada drive adag aalad: Wondershare Data Recovery ama Wondershare Data Recovery for Mac .
Talooyin : uma rakibi barnaamijka si Risaalo ka mid ah meesha aad xogta laga badiyay iskaga waxaa overwriting.
Labada of software ka wada yihiin ammaan iyo xirfadeed. Waxaad u isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado files oo ay ku jiraan sawirrada, videos, audio, email iyo dokumentiyo kala duwan oo aad u tirtiray, formatted ama lumay ay sabab u tahay sababo kale oo ka Sata drives adag, iyo sidoo kale noocyada kale ee drives adag, cajaladaha dibadda, kaararka xusuusta, USB drives, ciyaartoyda MP4, iPod, iwm hawsha oo dhan lagu fulin karaa in 3 tallaabo.
Step1 Run barnaamijka soo kabashada file Sata HDD on your computer
Ka dib markii socda software Sandisk kabashada USB, waxaad heli kartaa laba hababka soo kabashada raaca Doorashadaada: Wizard (sida default a) iyo Standard Mode.
Wizard: hab kabashada Tani waxay kuu ogolaanaysaa ansawers youcheck in laba su'aalood oo fudud, iyo barnaamijka samayn doonaa bidix. Waa hab ku habboon in bilowga ah.
Standard Mode, hab Standard waa ku weyn yahay, waayo, dadka isticmaala soo maray. Waxay bixisaa fursado kabashada kala duwan ee aad ka soo xusho, Lost Recovery, Recovery Barzakh, Recovery File ceeriin ah iyo furmaya Recovery.
Labada of qaabab dib u soo kabashada waa ciyaar saaxiibtinimo oo dareen leh. Next, ina keen inay soo socda iyo Wizard ka qaadan sida tusaale.
Step2 Dooro nooca file aad rabto in aad ka soo kabsado Sata drives adag ka.
Step4 loo sahlo baaritaan qoto dheer oo Start.
Step5 Kulanka Xiisaha Leh ceshan files lumay ka Sata drives adag
> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Sata Hard Drive